I-Plezi One: Isixhobo sasimahla sokuVelisa iiKhokelo ngeWebhusayithi yakho ye-B2B | Martech Zone
Emva kweenyanga eziliqela kusenziwa, Plezi, umboneleli wesoftware yentengiso ye-SaaS, usungula imveliso yakhe entsha kwi-beta yoluntu, iPlezi One. Esi sixhobo sasimahla kunye nesiqondakalayo sinceda iinkampani ezincinci neziphakathi zeB2B ziguqule iwebhusayithi yazo ibe yindawo ekhokelayo. Fumana indlela esebenza ngayo ngezantsi.
Namhlanje, i-69% yeenkampani ezinewebhusayithi zizama ukuphuhlisa ukubonakala kwazo ngeendlela ezahlukeneyo ezifana neentengiso okanye iinethiwekhi zentlalo. Nangona kunjalo, i-60% yabo ayinawo umbono wokuba ingakanani ingeniso yabo ezuzwa ngewebhu.
Ukujongana nobunzima bazo zonke iindlela ezahlukeneyo zokuthengisa zedijithali, abaphathi bafuna izinto ezimbini ezilula: ukuqonda okwenzekayo kwiwebhusayithi yabo kunye nokuvelisa izikhokelo kwiwebhu.
Emva kweminyaka emi-5 yokuxhasa iinkampani ezingaphezulu kwama-400 ngesoftware yayo yokuthengisa yonke into, iPlezi ifuna ukuya phambili ngokutyhila iPlezi One. Injongo ephambili yale software yasimahla kukuguqula nayiphi na iwebhusayithi ibe yijeneretha ekhokelayo, ukuze kuxhaswe inani elikhulu lamashishini ukusuka ekuqaliseni kwabo.
Isixhobo esiLula sokuGuqula iWebhusayithi yakho ibeyiNxibelela yeGeneyitha
I-Plezi One iququzelela ukuveliswa kweenkokeli ezivunyiweyo ngokongeza ngaphandle komthungo iifomu ezinemiyalezo ezenzekelayo kwiindawo zeenkampani. Ikwakuvumela ukuba uqonde ukuba isikhokelo ngasinye senza ntoni kwisiza, kwaye sitshintsha njani iveki neveki ngeedeshibhodi ezicocekileyo.
Le yinto ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuba uqala uhambo lwakho lwedijithali kwaye usajonge esona sisombululo siphambili kwisizukulwana esikhokelayo kunye nokulandelwa kwewebhu kudityanisiwe. Inzuzo ephambili ye Plezi One kukuba awudingi ukuba nolwazi lobugcisa ukuze ulusebenzise okanye uqalise ukuthengisa kwakho. Nantsi indlela esebenza ngayo.
Qala isicwangciso sakho sesizukulwana esikhokelayo
Iifomu zezona ndlela zilula kwaye zithe ngqo zokuguqula umtyeleli ongaziwa ukuba abe ngumkhokeli ofanelekileyo kwiwebhusayithi. Kwaye kukho intlaninge yamathuba okufumana umtyeleli ukuba agcwalise ifom, nokuba kukunxibelelana, ukucela ikowuti, okanye ukufikelela kwiphepha elimhlophe, incwadana yeendaba okanye i-webinar.
On Plezi One, ukudalwa kwefomu kwenziwa ngokukhawuleza ukuba wongeze uvimba omtsha. I-Plezi ibonelela ngeetemplates ezahlukeneyo, kunye nemibuzo elungelelaniswe kwiintlobo ezahlukeneyo zeefom ukuhambelana nezigaba zomjikelo wokuthenga (kwaye uqiniseke ukuba awumkhathazi umtyeleli ofuna nje ukubhalisela incwadana yakho ngemibuzo).
Ukuba ufuna ukwenza itemplate yakho yefom, ungakwenza oko ngomhleli kwaye ukhethe iindawo ofuna ukuzisebenzisa. Unokuziqhelanisa neefom ukuze zihambelane noyilo lwewebhusayithi yakho. Unokwenza ngokwezifiso umyalezo wakho wemvume ye-GDPR. Nje ukuba wenze iitemplates, ungazongeza kwindawo yakho ngokucofa kube kanye!
Unokwenza kwakhona ii-imeyile zokulandela ezithunyelwa ngokuzenzekelayo kubantu abazalise ifom, nokuba ngabathumela isibonelelo esiceliweyo okanye ukubaqinisekisa ukuba isicelo sabo soqhagamshelwano siye sahoywa. Usebenzisa iindawo ezikrelekrele, unokwenza ezi imeyile ngegama lomntu okanye isixhobo esifakwe ngokuzenzekelayo.
Qonda iNdlela yokuZiphatha abaphulaphuli kunye neNkokeli efanelekileyo
Ngoku njengoko iindwendwe zakho ziqala ukuzalisa iifom zakho, ulwandisa njani ulwazi lwazo? Kulapho i-Plezi One's Contacts tab ingena khona, apho uya kufumana bonke abantu abakunike iinkcukacha zabo zoqhagamshelwano. Kumfowunelwa ngamnye, uya kufumana izinto ezininzi eziya kukunceda ukuba wenze indlela yakho ibe yeyakho.:
Umsebenzi wondwendwe kunye nembali kuquka:
Amaphepha ajongwe kwindawo yakho
Ijelo elibazise kwindawo yakho.
Iinkcukacha zethemba. ihlaziywa kamsinya nje ukuba umfowunelwa anike ulwazi olutsha ngokunxibelelana nomnye umxholo:
Igama lokuqala nelokugqibela
Le thebhu inokuphinda isetyenziswe njengeqonga lolawulo lobudlelwane bomthengi omncinci (CRM) ukuba awukabinayo. Iqela lakho lokuthengisa linokongeza amanqaku kwirekhodi nganye ukugcina umkhondo wokuvela kobudlelwane kunye nethemba lakho.
Unokujonga lonke unxibelelwano lwabaphulaphuli bakho kwiwebhusayithi yakho, njengoko olu nxibelelwano lurekhodwa. Uya kuba nombono ongcono wokuba abaphulaphuli bakho bajonge ntoni kwaye ngowuphi umxholo abanokuthi banomdla kuwo.
Iskripthi sokulandelela siya kukubonisa apho ithemba lakho livela khona, yintoni abayenzayo kwiwebhusayithi yakho kwaye xa bebuya. Olu phawu luyingenelo kuba lukwenza ube nokuqonda ngaphambi kokuba uqalise incoko nabo. Uhlalutyo lunokukunceda ulandele kwaye uqonde amathuba akho.
Hlalutya iNdlela yokuSebenza kweQhinga lakho
Icandelo leNgxelo likuvumela ukuba ubone izibalo zezenzo zakho zokuthengisa ngokukhawuleza. I-Plezi ikhethe ukugxila kwidatha ebalulekileyo ekuqondeni ukusebenza kwendawo yakho kunye nesicwangciso sakho sokuthengisa, kunokuba uhlale kwiimetriki ezididayo nezinokuchithwa. Yeyona ndlela ilungileyo yokuba umphathi okanye umthengisi afikelele kwintengiso yedijithali!
Apha ungabona yonke into eyenzekayo kwindawo yakho ixesha elithile, kunye nenani leendwendwe kunye neentengiso ezikhokelela ekuthengiseni, kunye negrafu yefuneli yakho yokuguqula ukuze ubone ukuba bangaphi abathengi abakulethele yona. I-injini yokukhangela yokusebenzela (seo) icandelo likuvumela ukuba ubone ukuba mangaphi amagama angundoqo obekwe kuwo kwaye ubeka phi na.
Njengoko u bonayo, Plezi One iya ngokuchasene nokhozo lwezisombululo ezintsonkothileyo (kwaye zihlala zisetyenziswa ngaphantsi) ngokunikezela ngamava alwelo kwisixhobo esisembindini weqhinga lentengiso yenkampani.
Ibonelela ngamava abonakalayo ukuvumela iinkampani ezingekabinalo iqela elizinikeleyo ukuba ziqale ukuqonda amantongomane kunye neebholiti zentengiso yedijithali kwaye ziqalise ukuvelisa izikhokelo ngewebhusayithi yazo. Kulula ukuseta, kulula ukuyisebenzisa kwaye 100% simahla! Unomdla wokufikelela kwangoko kwiPlezi One?
Bhalisela iPlezi One SIMAHLA apha!
tags: b2bIsizukulwana esikhokelayo se-b2bCRMindalo yefomiitemplates zefomisixhobo sefombamba phambiliukukhokela genisizukulwana esikhokelayoisiqinisekiso esikhokelayopleziplezi enyeukufumana izikhokeloumsebenzi weendwendwe
UPaul-Louis nguMphathi weTrafikhi e Plezi, Isoftware ye-B2B yokuthengisa ezizenzekelayo kubathengisi.
Intengiso yokuziphatha ngokuchasene neNtengiso yoMxholo: Yintoni uMahluko?